‪#‎OromoProtests‬ guyyaa har’aa Abbaan Duulaatifi Muktaar hayyotaafi abbootii qabeenyaa beekamoo muraasa walitti qabanii turan – Welcome to bilisummaa
‪#‎OromoProtests‬ guyyaa har’aa Abbaan Duulaatifi Muktaar hayyotaafi abbootii qabeenyaa beekamoo muraasa walitti qabanii turan
Erga sakattaan cimaan godhamee booda waan isaan yaamaniif himan. Kunis ummanni nu dhagawuu didee nurraa qabbaneessaa kan jedhuudha. San booda hire warra hirmaateef kanname. Namni shan walduraa duubaan dubbate. Shananu akka waan nama tokko ta’anii yaaduma walfakkaatu itti hima. Waan jedhan keessaa
1) Isin akngoo waan takkalle godhuu waan hin qabneef gorsi isiniif laannu hin jiru
2) Warra dhiiga ummataatin of shamsen walitti dhiyaannee dhiiga dibachuu hin feenu
3) Aantummaan keenya ummata mirga isaatiif mormatu waliini
4) Gaafin amma waa’ee Mastar Pilaanii bira dabree jira. Dubbiin dubbii akka sabaatti dhumaatirraa of baraaruuti. Lollis sabatti labsamee waan jiruuf
Erga Oromoonni shanan yaada kana dhiheessaniin Muktaarifi Abbaanduulaa jiddumaan walgahii addaan kutanii bayanii deeman.
Waraabbii walgahii kanaa akkuma nu dhaqqabdeen isiniin geenya
Previous Mudde 19,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Calliyaa Magaalaa Geedoo Keessaa Beektotni Oromoo Humna Waraana Wayyaanee(Itihophiyaan) Ukkanfamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.
Next Viva Artistoota Oromoo; Nu Diinne Dinnee gabrummaa dinnee.. Didaa!!